Uhlu Lwamasayithi Aphezulu Okumaketha Okumakazisa 2017 we-SEO
Ingabe ufuna ukwakha i-High PR Social Bookmarking Backlink ephezulu? Kunzima kakhulu ukuthola uhlu lwezindawo eziphezulu ze-High PR Social Bookmarking 2017, akunjalo? Uke wazama ukuthola uhlu lwamasayithi? Manje asikho isidingo sokuthola lolu hlu ngoba ngidalile high PR Social Social bookmarking uhlu Uhlu 2017 ngawe lapha.
Thola uhlu olugcwele landela amawebhusayithi wokubhuka kwi-ITS Tech School. Ngifuna nokutshela inqubo yokusebenza kanye nesidingo samawebusayithi e-socialmarkmarking. Ungadala ama-backlink aphezulu aphezulungokubhalisa kulokhu okuhlanganisiwe uhlu lwamasayithi amabhukumaka 2017. Kumele futhi uhlole lokhu izincwadi zokuvunywa okusheshayo for backlinks esheshayo.
Iyini i-Social Bookmarking?
Amabhukhimakhi kuyindlela noma ukhetho olunikezwa ezipheqululini ezahlukene zamakhompiyutha ethu, amafoni smart kanye namathebhulethi ukugcina isixhumanisi sendawo ethile esingasetshenziswa ngokuqhubekayo esikhathini esizayo sokufunda noma ukubhekisela. Ngale ndlela i ibhukhimakhi yomphakathi sebenzisa kodwa amabhukimakhi atholakale ku-intanethi angagcinwa kwiwebhusayithi ethize yokubhuka ibhukhimakhi yezenhlalo. Isici esihle sama-bookmarking sites ukuthi amanye amalungu alowo webhusayithi yokubhukisa angabona futhi ahlanganyele izixhumanisi zakho ezilondoloziwe futhi uvakashele ikhasi elithile lewebhu kusuka kubhukimakhi akho alondoloziwe. Kukhona umgwaqo omkhulu kumaSibhukhimakhi wezenhlalo zomphakathi futhi yilokho kunamathuba okuthola ithrekhi yokudlulisa ngqo kusuka kulawa mawebhusayithi.
I-Backlink yekhwalithi yinto enkulu kakhulu yokuthola indawo enhle yegama elingukhiye kuma-injini yokusesha afana ne-google. Kukhona izinto ezibalulekile okufanele uziqaphele ngenkathi uthumele ama-URL wewebhusayithi yakho kumasayithi wezenhlalo zokubhuka:
Kumelwe ukuba Uqedile yonke iphrofayli kwenye iwebhusayithi ethize yokubhuka ibhukhimakhi. Qala kusuka kumsebenzisi lomsebenzisi kuya kuyo yonke imininingwane yomphakathi, kufanele ugcwalise wonke ikholomu. Kuzokunika ukwethembeka okuphezulu futhi kufinyelele kuphrofayela yakho yokubhukimela yomphakathi.
Ungafaki uhlu lwamasayithi wokubhuka amabhukhimakhi ngokuxhumanisa ama-URL amaningi kusuka kusayithi elifanayo. Futhi ibhukhimakhi amanye amawebhusayithi kanye.
I-Upvote & uthanda amanye amabhukumaka ukuze uthole okufanayo ekubuyiseni.
Zama ukubhala incazelo eyingqayizivele ngenkathi uhambisa ibhukumaka kwiwebhusayithi ehlukile.
Khetha isigaba esifanele futhi uthumele iwebhusayithi yakho esigabeni esifanele.
Nika amathegi afanele ahlobene nendaba yakho.
Ungakhohlwa ukuqinisekisa ikhodi ye-captcha enikezwe kuwebhusayithi ngenkathi uthunyelwa ibhukumaka.
Qaphela izikhangiso zogaxekile. Amanye amasayithi wokubhuka amabhulogi agcine izixhumanisi ezifihliwe & iziphakamiso ezikuholela emakhasini angenalutho namakhasi wewebhu wegaxekile.
Ukuze uhlawule ngokushesha usebenzisa izixhumanisi ezilandelayo ngezansi.
Manje sesiqoqe amawebhusayithi we-Social Bookmarking kuwe futhi sakha uhlu oluphelele I-PR High Free Do Landela Izingosi Zokukhangisa Zomphakathi.
Uhlu Lamasayithi Wokumaketha 2017